किनमेल को लागी सर्वश्रेष्ठ शहरहरु: शीर्ष १० गन्तव्यहरु कि पर्यटकहरु लाई मनपर्छ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » किनमेल » किनमेल को लागी सर्वश्रेष्ठ शहरहरु: शीर्ष १० गन्तव्यहरु कि पर्यटकहरु लाई मनपर्छ
ब्रेकि European युरोपेली समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • सम्पादकीय • समाचार • किनमेल • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार
किनमेल पर्यटन एक लोकप्रिय अवधारणा हो जुन आगन्तुकहरु द्वारा आयोजित पर्यटन को एक समकालीन रूप को रूप मा परिभाषित गरीएको छ जसको लागी सामानहरु को खरीद, आफ्नो निवास स्थान को बाहिर, यात्रा को लागी उनको निर्णय मा एक कारक हो। पसलहरु कहाँ यात्रा गर्न?
कोभिड for१ for को लागी मानिसहरुको भ्याक्सिन बढ्दै जाँदा, यात्रा फेरी बढिरहेको छ, पर्यटकहरु विश्वका धेरै शहरहरुमा पुनः देखा पर्न थालेका छन्।
जब एक यात्रा गन्तव्य मा निर्णय, धेरै पक्षहरु खेल मा आउँछ प्राथमिकताहरु र बजेट को आधार मा।
पर्यटकहरु को लागी जो आफ्नो यात्रा मा एक महान खरीदारी अनुभव को लागी खोजिरहेका छन् हामीले केहि राम्रो शहरहरु लाई सूचीबद्ध गरेका छौं यस बर्ष भ्रमण गर्न को लागी।
अनलाइन किनमेल बनाम स्टोर मा किनमेल
किनमेल को लागी हाम्रा विकल्पहरु पहिले भन्दा धेरै ठूलो छ। जबकि केहि मानिसहरु अझै पनी वास्तविक पसलहरु भ्रमण गर्न रुचाउँछन्, अरुहरु लाई उनीहरुको सामान र सेवाहरु अनलाइन को आदेश। धेरैजसो मानिसहरु, तथापि, दुबै को मिश्रण मनपर्छ। हामी किराना सामानहरु फ्रिज, एक आगामी घटना को लागी एक नयाँ पोशाक, र घर सजावट जस्तै भर्न आदेश छाप्छ हाम्रो घरहरु लाई निजीकृत गर्न।
स्मार्टफोन, ल्यापटप, र हाम्रो जीवन मा अन्य प्राविधिक उपकरणहरु संग, इन्टरनेट सजीलै हाम्रो जीवन को हरेक मिनेट सुलभ छ। जबकि अनलाइन किनमेल धेरै लोकप्रिय छ-र हाम्रो चाहनाहरु र आवश्यकताहरु को धेरै को लागी एक महान विकल्प बनी रहनेछ-स्टोर मा किनमेल को लागी माग पनि बलियो रहन्छ।
एक राम्रो किनमेल शहर के परिभाषित गर्दछ?
किनमेल अनुभव पर्यटकहरु लाई दुनिया भर मा शहरहरु लाई आकर्षित गर्दछ। प्रत्येक शहर एक अद्वितीय दृश्य प्रदान गर्दछ, तर धेरै सामान्य मा केहि चीजहरु छन्। तिनीहरू सामान्यतया छन् ठूला शहरहरु, बिभिन्न पसलहरु को एक किस्म र ठूलो चेन र स्थानीय बुटीक संग आकर्षक सडकहरु संग शपिंग केन्द्रहरु को एक मिश्रण संग।
मूल्यहरु कुन देश मा शहर मा स्थित छ, र जहाँ पर्यटक बाट आउँछ निर्भर गर्दछ। लोकप्रिय किनमेल शहरहरु कम मूल्य देखि लक्जरी को लागी पसलहरु प्रदान गर्दछ। सामान्य अनुभव पनि महत्त्वपूर्ण छ। न्यूयोर्क शहर र पेरिस जस्ता स्थानहरु हेर्न को लागी धेरै प्रस्ताव छ, साथै आवास र भोजन को लागी विकल्पहरु को धेरै।
किनमेल को लागी सबैभन्दा लोकप्रिय शहरहरु
पर्यटकहरु, जो किन्न मन पराउँछन्, उनीहरु कहाँ जान्छन्? यहाँ केहि वर्तमान मा सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरु छन्।
लाखौं पर्यटकहरु प्रत्येक बर्ष इंग्ल्याण्ड को राजधानी भ्रमण। शहर वेस्टफील्ड, Harrods मा लक्जरी किनमेल, बिभिन्न सडक बजार मा राम्रो सौदाहरु, र आकर्षक पसलहरु को धेरै जस्तै ठूलो किनमेल केन्द्रहरु प्रदान गर्दछ। चिया, कपडा, र स्मृति चिन्हहरु केहि अधिक लोकप्रिय वस्तुहरु यहाँ किन्न को लागी छन्। अक्सफोर्ड स्ट्रीट र कोभेन्ट गार्डन व्यस्त किनमेल क्षेत्रहरु छन्।
ह Hongक Kong मा पर्यटकहरु लाई खरीदारी को अवसरहरु को एक अनन्त आपूर्ति को लागी देखिन्छ। शहर दुबै ठूला किनमेल केन्द्रहरु र सडक बजार मा रोचक वस्तुहरु मा उच्च अन्त ब्रान्ड छ। Kowloon सबैभन्दा लोकप्रिय किनमेल क्षेत्रहरु मध्ये एक हो। पर्यटकहरु जो एक सौदा को लागी खोजिरहेका छन् उदाहरण को लागी टेम्पल स्ट्रीट र जेड मार्केट मा अवसरहरु को धेरै हुनेछ।
न्यूयोर्क शहर किनमेल जिल्लाहरु भरिएको छ, फिफ्थ एवेन्यू सबैभन्दा प्रसिद्ध को एक भएको साथ। विन्डो किनमेल धेरै राम्रो छ - विशेष गरी जब क्रिसमस दृष्टिकोण र शहर सजावट बाट भरिएको छ। ग्रीनविच गाउँ, लोअर ईस्ट साइड, सोहो, र मैडिसन एवेन्यू सबै अनौंठो किनमेल अनुभव प्रदान गर्दछ।
अधिक लोकप्रिय किनमेल गन्तव्यहरु:
यी दस शहरहरु लाई हरेक बर्ष लाखौं आगन्तुकहरु लाई आकर्षित गर्दछ। यी पर्यटकहरु मध्ये धेरै आफ्नो सूटकेसहरु संग घर उड्न को लागी उनीहरु आगमन मा थिए भन्दा धेरै भरिएको छ।
अधिक किनमेल समाचार को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
लाम्ब्डा संस्करण: खोप प्रतिरोधी र अधिक संक्रामक?
अक्टोबर 20, 2021 मा 13: 32